Barro sida jaceyl loogu abuuro naf aad ka heshay kudhawaad 10 farsamo | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada jaceyl Barro sida jaceyl loogu abuuro naf aad ka heshay kudhawaad 10 farsamo
Tuesday, December 19, 2017 Bulshada , jaceyl Edit
Bulsha:- Marka laga hadlayo jaceyl waxa uu uqeybsamaa dhowr nuuc lakin maanta waxaan diirada saareynaa midka dhex mara dhalinta dooneysa in ay sameytaan lamaane naftu ka dhaxeyso si ay nolosha uwada qeybsadaan.
Hadaba su,aashu waxey tahay qaabkee ayaa loo abuuraa jaceyl dhaxal gal ah loona kasbada naf kale si ay unoto mid ku jecel kuguna kalsoon daacadna kuu ah waxad kaga bogan doontaa newsmaanta.net.
1: haddi aad ka hesho gabar/wiil lakin uusan jiriin xiriir idinka dhaxeeyn uma baahna inaad usheegato xiriir jaceyl lakin wad kasban kartaa qalbigiisa/qalbigeeda adigoo maalin kasta wacaya salamaya kana warsanaya dhanka caafimaadka iyo familka iwm.
2: waxaad ugu tagi booqosho labadii asbuucba mar hadii ay macquul tahay aan qaadaneyn wax kabadan 5 daqiiqo adigoo usheegaya inaad usocotay xaafad kale oo udhaw dan kuu gaar ahlakin naftaadu jeclaatey inaad marto sidaasna aad usoo martay.
3: Bil iyo bar kadib waxaad ugudbin sawirkaaga sidii macquul ah, via bluetooth,email,facebook,whatspp,Viber, Twitter iwm haddii ay macquul tahana lamar mid footo ah una sheeg inaad sawiro kasoo qaadatay footada kadibna ku dheh mid kala bax.
4: usarbeeb sheekada wan hubaa in qofkaasi uu fahmi doona sarbeebta kuna oran doono hadii ay dumar tahay walalkey ayad tahay iska ilow waxas lkn waa afka ee qalbiga ma ahan hana niyad jabin kusoco marlabaad 3 qodob ee hore.
Wad arki iyadoo kuu sarbeebeysa iyaduna kolkeeda lakin muuji is adkeyn adigoo ka ilaalinaya wax jabiya niyadeeda.